I-Realme 3 Pro sele inomhla wokumiliselwa eSpain | I-Androidsis
Iiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba iRealme yayiza kuqala bathengise iifowuni zabo eYurophu kungekudala. I-brand yenze injongo yokuba neefowuni ngaphambi kokuphela kwekota yesibini yonyaka. Ngoku, siqala ukuba neenkcukacha zokuba iifowuni zabo ziya kuqala nini ukufika kwaye zeziphi iimodeli eziza kukhutshwa. Eyokuqala kuzo iya kuba yiRealme 3 Pro.
I-Realme 3 Pro yaziswa ngokusemthethweni Ekupheleni kuka-Epreli. Imodeli yoluhlu oluphakathi lweprimiyamu yomenzi. Ukuphehlelelwa kwayo kunomhla wokukhutshwa, ekungafuneki ukuba silinde ixesha elide. Kwiiveki ezimbalwa eziza kubakho ngokusemthethweni.
Le fowuni iza kuphehlelelwa ngokusemthethweni eSpain ngoJuni 5. Ibrand iyakungena nale Realme 3 Pro kwiimarike ezininzi eYurophu ekuqaleni kukaJuni. Ukongeza eSpain, iifowuni zayo kulindeleke ukuba zisungulwe eFrance, e-UK nase-Itali. Zonke iimarike ezine ngexesha elinye.
Ekuqaleni, kubonakala ngathi siza kukwenza oko ube nakho ukuthenga kwiwebhusayithi yenkampani. Nangona kulindeleke ukuba iphinde isungulwe ezivenkileni. Kodwa okwangoku asazi nto malunga nezivumelwano ezinokubakho zenkampani kunye nabasasazi bayo malunga noku. Ke kuya kufuneka silinde ithutyana.
I-Realme 3 Pro ikhutshwa kwiinguqulelo ezimbini, ngokusekwe kwi-RAM kunye nokugcinwa kwayo. Inye ene-4/64 GB, eya kuthi ixabiso layo libe kwi-euro ezingama-199. Ngelixa owesibini eyi-6/128 GB, amaxabiso ayo eSpain aya kuba ngama-249 euros. Kuzo zombini iimeko banexabiso elikhulu lemali.
I-brand sele icacisile ukuba bazimisele ukumilisela iifowuni ezininzi. Ke, le Realme 3 Pro yeyokuqala nje. Ngokuqinisekileyo ezi veki ziya kuba kukuqinisekisa iifowuni ezintsha eziza kuphehlelelwa ngokusesikweni eSpain, nakwezinye iimarike zaseYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Realme 3 Pro iya kuba yifowuni yokuqala yophawu eSpain